Fomba 10 voaporofo hitarika fifamoivoizana amin'ny tranokala ecommerce | Martech Zone
Fomba 10 voaporofo hitarika fifamoivoizana amin'ny tranokala ecommerce anao
Talata, Aogositra 20, 2019 Talata, Aogositra 20, 2019 Laura Himmer
"Ny marika Ecommerce dia miatrika tahan'ny tsy fahombiazan'ny 80%"
E-varotra azo ampiharina
Na eo aza ireo antontan'isa mahakivy ireo dia nahomby tamin'ny famokarana vola mitentina 27,800 2018 $ i Levi Feigenson nandritra ny volana voalohany tamin'ny orinasany ara-barotra. Feigenson, niaraka tamin'ny vadiny, dia nanangana marika eco-friendly accessories antsoina hoe Mushie tamin'ny volana jolay 450,000. Nanomboka teo dia tsy misy fiverenana intsony ho an'ny tompona ary koa ho an'ny marika. Ankehitriny, Mushie dia mivarotra eo amin'ny $ XNUMX.
Amin'ity vanim-potoana e-varotra fifaninanana ity, izay 50% ny varotra dia mandeha any Amazon, ny fivezivezena ary ny fanovana dia tsy azo atao mihitsy. Na izany aza, ireo mpiara-miasa amin'i Mushie dia nanaporofo fa diso izany ary nanamboatra ny làlana mankany amin'ny fitomboana tsy misy fitsaharana. Raha mahavita azy izy ireo dia azonao atao koa.
Ny hany ilainao dia ny paikady mifaninana mifangaro fironana hahasarika ny sain'ny olona. Ity torolàlana ity dia mamoaka ny paikadin'ny e-varotra Mushie miaraka amina fika mahasoa hafa hahafahana mivezivezy any amin'ny tranonkalanao izay mety hisy fiovana bebe kokoa.
Fomba 10 hitarihana fifamoivoizana amin'ny orinasanao amin'ny varotra varotrao
1. Mampiasà vola amin'ny Influencer Marketing
Tamin'ny voalohany, izaho dia nanoratra momba ny Google Adwords, saingy ny statistika dia mampiseho fa tsy dia manindry dokambarotra intsony ny mpampiasa satria tsy matoky azy ireo intsony. Ny ankamaroan'ny tsindry ataon'ny mpampiasa dia mankany amin'ny rohy biolojika tsy voaloa.
Raha tsy Google AdWords, dia inona no fomba haingana indrindra hametrahana ny vokatrao manoloana olona an-tapitrisany?
Marketing amin'ny Influencer.
Feigenson dia nanatratra olona an-jatony maro karazana sy micro-influencers hampiroborobo ny vokatra vokariny. Nandefa ny vokariny tany amin'i Jenna Kutcher izy, miaraka amina mpanaraka 4000, ary Cara Loren, miaraka amina mpanjohy 800,000.
Iray indray fandalinana tranga ny Milk Almond Silk nitatitra ny marika niteraka 11 avo heny amin'ny famerenam-bola amin'ny fampielezana marketing influencer mifanohitra amin'ny doka amin'ny dizitaly.
Ireo marika e-varotra dia mihevitra ny marketing influencer ho fampiasam-bola lafo vidy. Saingy nanamafy i Feigenson fa tsy mila mifandray amin'i Kim Kardashian ianao hanaparitahana ny vokatrao. Mazava ho azy, hanapotika ny bankinao tsy misy ROI mihitsy izany. Mifanohitra amin'izany, tadiavo ireo mpitaingina akany hanatona mpanjifa mifandraika kokoa fa tsy olon-kafa. Ireo influencer lehibe sy bitika dia afaka mampitombo ny fifamoivoizana e-varotra amin'ny ROI folo heny.
2. Laharana amin'ny Amazon
Fantatro fa ny rehetra dia miresaka momba ny laharana ao amin'ny Google, saingy Amazon dia motera fikarohana vaovao amin'ny tontolon'ny E-commerce.
As per Nitatitra ny USA Today, 55% amin'ireo mpiantsena an-tserasera no manomboka ny fikarohana ataony ao Amazon.
Nanao fianianana tamin'i Amazon i Feigenson noho ny fivarotana nomerika mihamitombo. Ny Amazon Fahatanterahany dia tsy vitan'ny hoe nanampy an'i Feigenson hikarakara ny fitehirizany ihany, fa hanome azy fidirana amin'ny mpihaino vaovao marobe sy fitaovana marketing, toa ny Keyword Research, hitombo mandrakizay.
Ankoatry ny atolotry Amazon, azonao atao ny mahazo ny fahatokisan'ny mpanjifa avy hatrany amin'ny fanangonana fanamarihana tena izy ny mpanjifa taloha sy ny fanoratana famaritana amin'ny antsipirihany momba ny vokatrao.
Aza milaza izao fa Amazon no mpifaninana aminao. Na dia izany aza, dia hianaranao zavatra betsaka momba izay tadiavin'ny mpampiasa sy ny fomba amin'ny alàlan'ny angon-drakitra mpanjifa Amazon.
3. Mamoaka ny herin'ny SEO
Eto dia tonga ny paikadim-barotra momba ny varotra ankafizin'ny tompona tranombarotra. Manomboka amin'ny fahalalana ny mpanjifa ka hatramin'ny fanoratana bilaogy ka hatramin'ny fampiroboroboana ny Amazon ka hatramin'ny laharana faha-1 ao amin'ny Google, SEO dia mitana andraikitra lehibe isaky ny dingana.
"93% amin'ny fitateram-bahoaka amin'ny totalin'ny habaka dia avy amin'ny Search Engine."
Midika izany fa tsy azo ihodivirana ny SEO. Na firy na firy ny fiakaran'ny haino aman-jery sosialy mankany an-tampony, dia manokatra Google hatrany ireo mpampiasa mba hikaroka ireo vokatra tian'izy ireo hovidiana.
Hanombohana SEO, tsy maintsy manomboka amin'ny teny lakile ianao. Manomboha manangona teny fanalahidy apetraky ny mpampiasa ao amin'ny Google hikaroka vokatra mifandraika amin'izany. Ampiasao planner Google Keyword raha mila fanampiana fanampiny. Na azonao atao ihany koa ny maka torohevitra amin'ny fitaovana voaloa toy ny Ahrefs tetika mandroso SEO.
Ampiharo ao amin'ny pejin'ny vokatrao, ny URL, ny atiny ary na aiza na aiza ilaina ny teny rehetra ireo teny fanalahidy nangoninao. Hamarino tsara fa tsy ho tafintohina amin'ny teny famenon-teny. Ampiasao voajanahary izy ireo mba hiarovana anao amin'ny sazy Google.
4. Paikady ny atiny
Tsy afaka manoratra na inona na inona ianao, mamoaka azy, ary manantena ny mpihaino hihira ny vokatrao. Ary koa, ianao tsy afaka miankina amin'ny lahatsoratra fotsiny hampielezana ny fahafantarana ny vokatrao. Nihoatra ny fetran'ny teny voasoratra ny atiny. Ny bilaogy, horonan-tsary, sary, podcast sns ... dia miisa ambanin'ny sokajy atiny avokoa ny zava-drehetra. Ny famoronana votoaty tsy mitongilana dia hampisafotofoto anao momba ny zavatra hamoronana, ny fomba hamoronana ary ny toerana hamoahana. Izany no antony ilana paikady atiny hamonjy ny fotoanao ary hiteraka fifamoivoizana mety amin'ny fantsona mety.
Voalohany indrindra, soraty ireo endrika atiny ilainao. Ohatra:
Lahatsoratra momba ny fampiasana sy ny tombotsoan'ny vokatra
Ny votoatin'ny mpampiasa
Na izay anananao amin'ny arsenal.
Omeo ny mpanoratra, mpamolavola, na izay mandray anjara amin'ny fizotran'ny atiny ny asa. Apetraho ilay lehilahy tompon'andraikitra mba hahazoana ny atiny ara-potoana ary hamoaka azy amin'ny toerana mety. Ohatra, ny manam-pahaizana momba ny SEO dia tokony hikarakara lahatsoratra iray havoaka ao amin'ny bilaogin'ilay orinasa ary hampiroborobo amin'ny media sosialy.
5. Manambara fandaharana momba ny referansa
Mbola tadidiko ny andro naha-e-varotra an'i Amazon vaovao, nandefa mailaka aho hitondrako ireo namako ho takalon'ny vola. Taona maro lasa izay. Ny paikady dia mbola ao fironana amin'ny fivarotana e-varotra vaovao na ireo izay te hahazo tanjaka haingana. Raha ny tena izy, amin'ity vanim-potoana media sosialy ity izay fombafomba isan'andro ny fizarana dia tian'ny rehetra ny manandrana manararaotra mahazo vola vitsivitsy ho takalon'ny fanondroana ireo tranonkala amin'ny namany. Ireo namako media sosialy dia manao izany hatrany. Ka azoko antoka ilay tetika io.
Ny marketing amin'ny mailaka dia mbola manana fahefana hangalatra ilay seho, indrindra ho an'ireo tranonkala E-commerce. Amin'ny marketing mailaka dia azonao atao ny mampiditra vokatra vaovao amin'ireo mpanjifanao taloha ho an'ny famokarana fifamoivoizana haingana. Mamela anao hanaparitaka ny fahalalanao ny tranokalanao izany. Ny marketing amin'ny mailaka koa dia iray amin'ireo fantsona malaza hampiroborobo ny atiny, ny fahatongavan'ireo vaovao, na ny fihenam-bidy. Ary aza hadino ireo sarety nilaozana, izay anampian'ny mpampiasa vokatra ao anaty sarety fa tsy tsindrio mihitsy ny mividy. Amin'ny marketing amin'ny mailaka, azonao atao ny mandray ny mpampiasa amin'ny dingana farany amin'ny fividianana ny vokatra.
Ity misy ohatra mailaka ho an'ireo mpampiasa sarety nilaozana:
7. Mametraha porofo ara-tsosialy
Manodidina ny 70% amin'ireo mpanjifa an-tserasera no mijery ny hevitry ny vokatra alohan'ny hanaovana fividianana.
Ny valin'ny vokatra dia in-12 azo itokisana kokoa raha oharina amin'ny famaritana ny vokatra sy ny kopian'ny varotra.
Porofo ara-tsosialy dia porofo iray ho an'ny mpanjifa, avy amin'ny mpanjifa taloha, fa azon'izy ireo atokisana ny marika sy ny vokatrao. Amazon dia tototry ny porofo ara-tsosialy. Ho fanampin'izany, ny porofo ara-tsosialy dia mandray anjara amin'ny atiny ihany koa, manome sakafo ny fikarohan'ireo motera fikarohana ho an'ny atiny vokarin'ny mpampiasa.
Tsy mahagaga raha avo lenta i Amazon amin'ny ankamaroan'ny vokatra.
Manomboha manangona hevitra na mila investissement kely aza. Ohatra, omeo valisoa ireo mpanjifanao taloha tamin'ny famoahana hevitra misy sary na horonan-tsary hahazoana fitomboana haingana amin'ny fifamoivoizana ary hahazo fitokisana avy hatrany amin'ireo mpanjifa vaovao.
8. Misehoa amin'ny fantsona haino aman-jery sosialy
Ny media sosialy no tranon'ny mpampiasa faharoa.
Salesforce dia nitatitra fa ny 54% amin'ny taonarivo dia mampiasa fantsona media sosialy amin'ny vokatra fikarohana.
Raha miresaka momba ny tenako aho, ny doka Instagram (toy ny horonan-tsary) dia mitaona ahy hividy vokatra na hisoratra anarana ho mpikambana. Ka afaka miteny aho fa ny fantsona media sosialy dia mety ho kinova kely amin'ny fivarotana e-varotrao. Mamorona fivarotana amin'ny fantsona media sosialy izay ipetrahan'ny mpihaino anao ary mamoaka atiny tsy tapaka. Mandehana doka ihany koa hanaparitahana ny fampahafantarana sy handroahana fifamoivoizana eo noho eo.
9. Apetraho eo alohan'ireo mpivarotra varotra
Ny antony lehibe hijereko ny Amazon momba ny vokatra fikarohana dia ny mahita ireo mpivarotra lafo indrindra misy hevitra farany ambony. Amazon dia nanangana tsara an'io endri-javatra io. Nikaroka ny menaka voanio tsara indrindra aho. Amazon dia nanome ahy antony lehibe hividianana azy amin'ny bestseller.
Miaraka amin'ity endri-javatra ity fotsiny dia tsy mila mihady lalina izay vokatra hovidiana aho. Ary manana fotoana ampy aho hamakiana hevitra momba ilay vokatra naroso.
Amin'ny fampisehoana ireo vokatra amidy tsara indrindra, asehonao amin'ny mpampiasa izay novidian'ny hafa ary nahoana izy ireo no tokony hanandrana. Ity dia fomba iray voaporofo hampitana ny fikarakaranao - mitombo ny fahatokisan'ny mpampiasa, izay manome ny fanapaha-kevitr'izy ireo hividy.
Alaharo ireo vokatrao ary esory ny vokatra amidy be indrindra. Fandaharam-potoana ho tonga eo alohany isaky ny mikaroka teny lakile mitovy amin'izany ny mpampiasa. Alefaso anarana ireo vokatra amidy indrindra miaraka amin'ny anarana toy ny safidin'ny marika na tolo-kevitr'ireo mpampiasa.
10. Manolora fandefasana maimaim-poana aorian'ny fetra voafaritra iray
Mametraha fetra manokana amin'ny fandefasana maimaim-poana. Ohatra: “Fandefasana maimaimpoana amin'ny kaomandy mihoatra ny $ 10”Na izay vidiny tianao.
Mety tsara loatra ity iray ity raha te hanantona ireo mpampiasa ianao amin'ny fampidirana entana bebe kokoa amin'ilay lisitra nefa tsy terenao izy ireo.
Ny fomba rehetra resahina etsy ambony dia mora ampiharina. Ny sasany amin'izy ireo dia maka fotoana raha misy kosa afaka mihetsika avy hatrany. Aza mampihatra fotoana firy amin'ny fakana andraikitra ankehitriny, ary apetraho ny ekipanao hiasa amin'ny hetsika mandany fotoana. Miverena ary ampahafantaro ahy izay tianao indrindra. Mirary ny soa indrindra.
Tags: AmazonContent Marketingmitondra fiovam-pomitondra fiara fifamoivoizanae-varotraecommercemailaka Marketingmarketing marketingfikarohana biolojikaanaranaSEOporofo ara-tsosialy
Laura Himmer dia mpamoaka lahatsoratra mahay. Ny faritra misy azy dia ny Marketing Guide, ny famahanam-bolongana lamaody, ny fomba fiaina ary ny fanentanam-panahy. Izy dia olona tsy salama saina ary tia yoga. Laura dia vehivavy tsy matahotra sy be fitiavana.
Uscreen: Lahatsary amin'ny filana fangatahana sy sehatra TV an'ny Native Native
Azontsika atao ve ny mamono ny angano manintona?